#Betty Reardon Archives - Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda
Dib-u-qeexidda amniga ee lagu qabanayo muggani waxa ay noqon doontaa mid dunidu udub dhexaad u noqon doonto sahaminta fikradeeda iyo in lagu saleeyo khatarta jirta ee xiisadda cimilada. Malaha hoose ee sahaminta ayaa ah in aan si qoto dheer u bedelno fikirkeena, ee ku saabsan dhammaan dhinacyada amniga; ugu horrayn, waxa ku saabsan meereheena iyo sida uu noolaha bani-aadamku ula xidhiidho. Soo jeedinta waxay ku egtahay Juun 1. [sii wad akhriska…]
Ururintan ayaa sahamin doonta fikradaha amniga dumarka iyo istaraatiijiyadaha suurtagalka ah ee isbeddelka si loogu beddelo nidaamka amniga caalamiga ah ee ka imanaya iskahorimaadyada/dhibaatooyinka baahsan ee loo beddelo amniga aadanaha oo xasilloon oo joogto ah oo ku salaysan caafimaadka deegaanka iyo hay'adda aadanaha iyo mas'uuliyadda. Soo jeedinta waxay ku egtahay May 15 [sii wad akhriska…]
Wadahadal lala yeeshay Betty Reardon: Sheekooyinka Waxbarashada Nabadda
Febraayo 17, Shabakadda Waxbarashada Nabadda (PEN) ee Macallimiinta College, Jaamacadda Columbia waxay martigelisay aqoonyahannada waxbarashada nabadda ee caanka ah Dr. Betty Reardon wadahadal is-dhexgal ah oo sahaminaya taariikhda waxbarashada nabadda, isbeddellada hadda, iyo saadaalinta mustaqbalka. Fiidiyowgu hadda waa diyaar [sii wad akhriska…]
Shabakadda Waxbarashada Nabadda ee Kulliyada Macallimiinta waxay kugu martiqaadaysaa inaad ku soo biirto "Wadahadal lala yeelanayo Betty Reardon: Sheekooyinka Waxbarashada Nabadda" Febraayo 17. [sii wad akhriska…]
Waxaan rabnaa in haweenku ay aadaan iskuullada iyo cadaadinta kuwa aan waxba galabsan si ay u joojiyaan. Laakiin ma rabno in dadka caadiga ahi ay barafoobaan oo ay gaajoodaan, sidoo kale. [sii wad akhriska…]